Kunatsiridza muIngwaru Kuzvishandira-Service | Martech Zone
China, Gunyana 27, 2012 Chitatu, September 26, 2012 Douglas Karr
Kana iwe wakaita seni, unozvidza kubata nebasa revatengi. Hazvirevi kuti ini handidi vanhu - vanoita nepavanogona napo. Asi kazhinji kazhinji kwete, ndinoziva zvakawanda pamusoro pechinetso chandiri kumhanyira kupinda kwavari. Ini ndinovenga kugara parunhare ndakabata kwemaminetsi mashanu, ichiteverwa nehurukuro kwemaminetsi gumi nemashanu, ichiteverwa nekukwira uye kumirira kwakawanda uye tsananguro
Nyaya zhinji ndinozvigadzirisa, kana ndinotendeukira kunetiweki yangu kuti indibatsire. Yakanakisa sevhisi sevhisi, mumaonero angu, yakanyatsogadziriswa ruzivo-hwaro kana FAQ yandinogona kuzvishandira pachangu. Ini ndichapedza hafu yezuva ndichitsvaga mhinduro pane kutora foni iya yakaipa. Zvinoita sekunge vamwe vanobvumirana.
Sei tichitaura nezvevashandi pane a Kushambadzira blog? Yese nzira yemagariro inotanga nehukuru hwekuzvishandira-basa. Kana iwe ukasapa maturusi ari kutsvaga vatengi vako, nzvimbo yekutanga yavanonyunyuta iri online. Kutaurirana kwakashata uku kunogona kudzikira zvakanakisa zvekushambadzira mishandirapamwe!
Mufananidzo wakatumirwa pakutanga Zengage, Iyo Zendesk Blog
Tags: Mabatiro evatengikasitoma rutsigiroinfographickuzvishandirazendesk
Kutsigira Kutsigira pasina Kutengesa Mweya Wako